IZAY ATERAKY NY NOFO – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 juin 28, 2013 Laisser un commentaire sur IZAY ATERAKY NY NOFO
« Raha misy olona tsy ateraky ny rano sy Fanahy, dia tsy mahazo miditra amin’ny fanjakan’Andriamanitra izy. Izay ateraky ny nofo dia nofo; ary izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. » Jaona 3: 5b-6
Nahavaky loha ity raiamandreny be (i Nikodemosy) tokoa ny momba ny fahaterahana noresahin’I Jesosy taminy, indrindra fa noho ny maha efa lehibe azy. Misy ny fahaterahana hafa ankoatry ny niterahan’ny ray aman-drenintsika antsika raha ny lazain’ity Jaona toko faha telo ity. Ny niterahan’ireo ray sy renintsika antsika tokoa dia ara-nofo ihany: io no lazaina eto hoe nateraky ny nofo. Izay ateraky ny nofo dia nofo. Raha vao zaza izany isika dia nofo ihany. Izay ateraky ny Fanahy dia fanahy. Tsy mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra izay ateraky ny nofo. Isika olombelona rehetra izao dia nateraky ny nofo ihany ary tsy mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra raha tsy ateraky ny rano sy Fanahy.
Ny sakramenta dia fiasan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny zavatra hita maso, miombona amin’ny Tenin’Andriamanitra hitondrana ny fanjakan’Andriamanitra ao anatin’ny olona iray. Ity resahina eto ity dia sakramenta iray misy eo amin’ny fiangonan’Andriamanitra. Ny rano dia rano ihany, fa raha miombona amin’ny Tenin’Andriamanitra izy dia tsy rano tsotra intsony, fa rano sy Tenin’Andriamanitra miaraka. Ny Teny dia Andriamanitra (Jaona1:1b) ary Andriamanitra dia Fanahy. Ny Tenin’Andriamanitra miasa ao anatin’ny olona dia mitondra Fanahy Masina ao anatiny, mitondra ny fahaterahana indray ao anatin’izany olona izao. Raha tsy ateraky ny rano sy Fanahy ny olona dia tsy mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra. Ny sakramentan’ny batisa izao resahina eto izao.
Efa mba nateraky ny rano sy Fanahy ary ve hianao? Rehefa natao Batisa na Batemy hianao, izay lazaina amin’izao teny izao hoe ateraky ny rano sy Fanahy dia mahazo miditra ny fanjakan’Andriamanitra. Ny Fanahy ihany no afaka miteraka ara-panahy, izay ateraky ny Fanahy dia Fanahy. Raha efa natao Batisa hianao dia aoka hiaina amin’ny Tenin’Andriamanitra, araka ny Fanahy izay niterahana anao. Mety efa natao batisa hianao nefa tena nanalavitra an’Andriamanitra. Miverena haingana amin’Andriamanitra hianao, ka ankatoavy isan’andro ny Teniny. Izay manatona Azy tsy mba ho laviny mihitsy.
Publié parfilazantsaramada juin 28, 2013 Publié dansUncategorized